यस्ता छन् बाङ्गा टिंगा दाँतको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने तथ्यहरु #TeethBraces • Health News Nepal
यस्ता छन् बाङ्गा टिंगा दाँतको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने तथ्यहरु #TeethBraces
✍️ डा. मुकुन्द झा
यदि दाँत बाङ्गो टिंगो छ भने सबैभन्दा पहिले दाँतमा फोहोर जम्ने हुन्छ। दाँत माझ्नलाई समेत अप्ठेरो हुन्छ किनभने ब्रस दाँतको कुनाकाप्चामा पुग्न सक्दैन। यसकारणले मुख गनाउने र दाँतमा किरा लाग्ने समस्याहरु अरु समान्य मानिस भन्दा बढी हुन्छ। राम्ररी ब्रस गर्न नमिल्दा गिजाको समस्या समेत देखिन सक्छ। गिजाबाट रगत आउने, सुन्निने धेरै मानिसहरूमा देख्न सकिन्छ। समयमै बाङ्गोटिङ्गा दाँतको उपचार नगराई बस्दा दातासँगको हड्डी खिइने र पछि गएर दाँत हल्लिने समेत हुनसक्छ । जसलाई हामीले Periodontal problems भन्न सक्दछौं।
बाङ्गा टिङ्गा दाँतका कारण खुलेर हाँस्न र साथीभाईहरु सित कुराकानी गर्न समेत अप्ठेरो हुन्छ र विशेषत बच्चाहरूमा self Confidence कम हुदैं जान सक्छ। बाङ्गा टिङ्गा दाँतका कारण बोल्दा अथवा कुनै शब्द उच्चारण गर्दा स्पष्ट हुँदैन।
विरामीहरुमा Temporomandibular joint मा समेत समस्याहरु देखिन सक्छ। मुखमा दातँको टोकाइ नमिल्दा खाना चपाउन गार्हो हुन्छ ।
के दाँतको बिचको ग्यापलाई orthodontics Treatment गर्न मिल्छ?
दाँतको बिचमा ग्याप आउनुको कारण पत्ता लगाई उचित उपचार गर्न मिल्छ।
कस्तो केसमा अर्थोडोन्टिक उपचार गराउन मिल्छ?
यदि कसैको दाँत बाङ्गोटिङ्गो छ कसैको दाँतको बिचमा ग्याप छ, यदि कुनै बिरामीलाई हाँस्दा दाँत बाहिर निस्केको अनुभूति हुन्छ, कसैलाई खाना चपाउदा अथवा कुनै शब्द उच्चारण गर्दा असजिलो हुन्छ । राति सुत्ने बेला दाँत कटकटाउने बानी छ भने उसले अर्थोडोन्टिक उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनु पर्छ ।
यदि कसैलाई Obstructive sleep apnoea diagnose भएको छ भनेपनि अर्थोडोन्टिष्टको सल्लाह परामर्शलाई मुखभित्र Appliance हरु लगाउनु पर्ने हुन सक्छ।
को सँग दाँत मिलाउँदा ठिक हुन्छ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका दक्ष र अनुभवी अर्थोडोन्टिष्ट सँग मात्र दाँत मिलाउन सकिन्छ।
(कन्सलटेन्ट अर्थोडन्टिष्ट डा. झा ऊँ चाबहिल डेन्टल कोटेश्वरमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)
Tags: Consultant orthodonticsCorona Virus #Covid19Dr. Mukunda jhaObstructive sleep apnoea diagnoseOm chabehil dental koteshworTeeth braces
कोलोरेक्टल क्यान्सर: स्क्रीनिंग, पहिचान र रोकथाम #ColorectalCancer
एभरेष्ट अस्पतालले नारी दिवसको दिन स्वास्थ्य शिविर गर्ने
Our Planet, Our Health: A Timely Discussion Issue for Multi-Level Action
लागूऔषध खान्छु भनेर जन्मिने होइन परिस्तिथिले पुर्याउने हो
नेपालको कार्डियाक एम.आर.आई. मा सानदार शतकीय पारी!!
के हो ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिस? कसरी बच्ने? यस्ता छन् विशेषज्ञका टिप्सहरु
फोक्सोको क्यान्सरले निम्त्याउने समस्याहरु #Lungscancer
औषधि तथा अन्य सामग्री खरिदका लागि नेपाली सेनाको चीन सरकार सँग सम्झौता #Covid19
लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै बृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न #Blood-donation